February 2020 - Myanmar Sports Villages
အာဆင်နယ်မှာ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်အထိ အိုဇေးလ်ကစားသွားမည်ဟု သူ၏ အေးဂျင့် အတည်ပြု
အာဆင်နယ်အသင်းကွင်းလယ်ကြယ်ပွင့် မီဆွတ်အိုဇေးလ်ဟာ အသင်းနဲ့ ၂၀၂၁ ဇွန်လအထိ စာချုပ်သက်တမ်းရှိပါတယ်။ ဒီကြားထဲကာလအတွင်း အိုဇေးလ်ဟာ မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မျှ အသင်းမှ ထွက်ခွာသွားမည်မဟုတ်သလို၊ စာချုပ်သက်တမ်းပြည့်သည်အထိ မြောက်လန်ဒန်မှာသာ ဆက်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သူ၏အေးဂျင့် အာကွတ်ဆိုးဂတ်က အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားပိုင်ရှင် အိုဇေးလ်ဟာ ၂၀၁၈ ဆောင်းရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာ ကလပ်အသင်းစံချိန်တင်လစာနှင့်အတူ ၃ နှစ်သက်တမ်းထပ်တိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အူနိုင်းအမ်မရီလက်ထက်မှာ ပွဲထွက်များပျောက်ဆုံးနေခဲ့ခြင်းကြောင့် အာဆင်နယ်မှ ထွက်ခွာမည်ဟု နာမည်ကြီးခဲ့သော်လည်း အာတီတာလက်ထက်ရောက်သည်အချိန်မှာတော့ ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး အရေးကြီးသော ကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အာတီတာကိုယ်တိုင်လည်း အသင်းဖော်ဟောင်း အိုဇေးလ်ကို အသင်းမှာ ဆက်ရှိဖို့ ဆန္ဒရှိနေပြီး ပုံမှန်ကစားခွင့်ကို ပေးထားခဲ့ပါတယ်။ အာတီတာ ကိုင်တွယ်ချိန်မှစ၍ အိုဇေးလ်ဟာ ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိလာသည့်အပြင် သူကိုယ်တိုင်လည်း အာတီတာလက်အောက်မှာ ကစားရသည်ကိုပျော်ရွှင်နေကြောင်း ဆိုးဂတ်က အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ “အိုဇေးလ်က ဒီမှာဆက်ကစားဖို့ ၁၅ လကျန်ပါသေးတယ်။ အဲဒီအချိန်မတိုင်ခင်တော့ အာဆင်နယ်အသင်းမှာ ဆက်နေမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။...
FA ရဲ့ နည်းဥပဒေ ပုဒ်မ E3 အရ ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူခြင်းကို ခံခဲ့ရသည့် လိဒ်ယူနိုက်တက် ဂိုးသမားကာဆီလာ
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် ကစားသမားဟောင်း၊ လက်ရှိ လိဒ်ယူနိုက်တက်၏ ဂိုးသမား ကီကို ကာဆီလာဟာ လွန်ခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလအတွင်း ချာလ်တန်အသင်းနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ တဖက်အသင်းရဲ့ တောင်ပံကစားသမား ဂျိုနသန်လီကိုအား လူမျိုးရေးခွဲခြားသည့် စကားလုံးများဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲမှာတော့ ချာလ်တန်အသင်းဟာ လိဒ်ယူနိုက်တက်ကို (၁-ဝ) ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရရှိသွားခဲ့သလို၊ လီကိုသည်လည်း ပွဲအပြီးမှာ ဒိုင်လူကြီးများထံ တိုင်ကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ကို FA မှ နိုဝင်ဘာလအတွင်း စတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး ကာဆီလာဘက်မှ ပြစ်မှုမြောက်သည်ကို တွေ့ရှိရသည့်အတွက် FA ၏ နည်းဥပဒေ ပုဒ်မ (E3) အပိုဒ်ခွဲ (2) အရ ၈ ပွဲပယ် ပြစ်ဒဏ် နှင့်အတူ ဒဏ်ကြေး ပေါင် ၆၀၀၀၀ ကို ဆောင်ရမည်ဟု ဒဏ်တပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကာဆီလာဟာ ဂျိုနသန်လီကိုအပေါ်မှာ လူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံသည့် စကားလုံးများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်သုံးစွဲခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့် ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ် နှင့်...
ကလပ်ဘရုခ်ကို ဂိုးပြတ်အနိုင်ရတဲ့ ပွဲစဉ်အပြီးမှာ အသင်းရဲ့ ကစားသမား ၂ ဦးကို ချီးကျူးခဲ့သည့် ဆိုးလ်ရှား
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ယူရိုပါလိဂ်ပထမအကျော့မှာတော့ ဘယ်လ်ဂျီယမ်ကလပ် ကလပ်ဘရုခ်အသင်းကို သရေသာ ကစားနိုင်ခဲ့သော်လည်း ဒုတိယအကျော့ အိုးထရက်ဖို့ဒ်၌ ကစားချိန်မှာတော့ သွင်းဂိုးမြိုင်မြိုင်ဖြင့် အနိုင်ယူပြီး နောက်တဆင့်ကို သာသာယာယာတက်လှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အတွက် သွင်းဂိုးများကိုတော့ ဇန်နဝါရီမှ အသစ်ခေါ်ယူထားတဲ့ လူသစ် (၂)ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဖာနန်ဒက်စ်၊ အီဂါလို နှင့်အတူ၊ ဒဏ်ရာမှ ပြန်လည်သက်သာလာသည့် တော်မီနေး၊ ဖရက်ဒ်တို့က သွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲရဲ့ အလှည့်အပြောင်းဖြစ်စေခဲ့တာကတော့ ပွဲချိန် ၂၃ မိနစ်မှာ ကလပ်ဘရုခ် နောက်ခံလူ ဆိုင်မွန်ဒီလိုင်းက ဒန်နီရယ်ဂျိမ်းစ်ကန်သွင်းသည့် ဘောလုံးကို လက်ဖြင့်တားခဲ့သည့်အတွက် တိုက်ရိုက်အနီကတ်ဖြင့် ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အနီကတ်နှင့်အတူ ကလပ်ဘရုခ်ဟာ ပင်နယ်တီတစ်လုံးပါပေးလိုက်ပြီး ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်က အမှားအယွင်းမရှိကန်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ဖာနန်ဒက်စ်သွင်းပြီး နောက်ထပ် ၇ မိနစ်အကြာမှာပဲ ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူး အီဂါလိုက မာတာဖြတ်ပေးသော ဘောလုံးကို ပိတ်သွင်းပြီး ယူနိုက်တက် ကစားသမားဘဝပထမဦးဆုံးသွင်းဂိုးကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ တယေက်အသာဖြင့် ကစားရတဲ့...
ဒဏ်ရာကနေ အလုံးစုံပြန်လည်သက်သာလာဖို့ဆိုရင် လီဝန်ဒေါစကီးတစ်ယောက် ဘယ်လောက်ကြာကြာ အနားယူရမှာလဲ ?
ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် (၁၆) သင်းအဆင့် ပထမအကျော့ပွဲစဉ်မှာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ရဲ့ အဓိကတိုက်စစ်မှူး လီဝန်ဒေါစကီးဟာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပွဲချိန် ၃၆ မိနစ်မှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပေမယ့် လီဝန်ဒေါစကီးဟာ လူစားလဲခဲ့ချင်းမရှိပဲ တစ်ပွဲလုံးကစားခဲ့ကာ သူကိုယ်တိုင် တစ်ဂိုးသွင်းယူပြီး ဂနာဘရီအတွင် သွင်းဂိုး ၂ ဂိုးတောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲအပြီး ဂျာမန်မြေပြန်အရောက်မှာတော့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ဟာ လီဝန်ရဲ့ ဒဏ်ရာကို သေချာစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ စစ်ဆေးပြီးထွက်ပေါ်လာသည့်အဖြေအရ အနည်းဆုံး ၄ ပတ်လောက်နားရမယ်လို့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်က အတည်ပြုကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ကလပ်အသင်း၏ ကြေငြာချက်အရ လီဝန်ဟာ လောလောဆယ် ဒဏ်ရာကြောင့် ၁၀ ရက်လောက်ကို ပလာစတာကပ်ထားပြီး မလှုပ်မရှားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာလင်-အားကစား၏ အရိုးအထူးကုဆရာဝန်ကတော့ လီဝန်ရဲ့ ဒဏ်ရာဟာ လေးပတ်လောက် အနားယူရုံနဲ့ သက်သာရုံအနေအထားသာ ရှိပြီး မြက်ခင်းစိမ်းပေါ်မှာ အပြည့်အဝ ပြန်လည်ကစားဖို့ မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။...
အူဘာမီယန်းအနေနဲ့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှူး တစ်ယောက်ဖြစ်တာဆိုတာ သက်သေပြဖို့အတွက် ဆုဖလားတွေ မလိုအပ်ပါဘူး #အာတီတာ
အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် သွင်းဂိုးများစွာ သွင်းယူပေးနေသော တိုက်စစ်မှူး အူဘာမီယန်းဟာ ထိပ်တန်းကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့် တိုက်စစ်မှူးတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက် ဆုဖလားတွေနဲ့အတူ သက်သေပြဖို့ မလိုအပ်ကြောင်း အာတီတာက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲသည့်တစ်ပတ် အဲဗာတန်နဲ့ ပွဲစဉ်မှာ အူဘာမီယန်းဟာ အသင်းအတွက် ၂ ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပြီး အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် ခက်ခဲ့သည့်အချိန်မှာ နိုင်ပွဲတစ်ပွဲရအောင် ဆောင်ကျဉ်းပေးခဲ့ပါတယ်။ Sky Sports မှာ ဘောလုံးဝေဖန်သုံးသပ်သူအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသည့် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကစားသမားဟောင်း ဂယ်ရီနဗီးလ်ကိုယ်တိုင် အူဘာမီယန်းကို အဲဗာတန်ပွဲအပြီးမှာ ချီးကျူးသွားခဲ့သော်လည်း ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ တိုက်စစ်မှူးတစ်ယောက်မဟုတ်သေးကြောင်း ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ဂယ်ရီနဗီးလ်၏ ပြောကြားချက်ကို အာတီတာက လက်မခံပဲ အရည်အချင်းဟာ ဆုဖလားထက်အရေးကြီးသည့် ပုံစံဖြင့် ပြန်လည်ချေပခဲ့ပါတယ်။ ထို့အတူ စပါးစ်အသင်းမှာ အူဘာမီယန်းကဲ့သို့ပင် ဂိုးသွင်းနေသည့် ဟယ်ရီကိန်းသည်လည်း အောင်မြင်မှုဖလားမရရှိပေမယ့် ကမ္ဘာ့တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးဖြစ်နေသည်ဆိုတာကို အာတီတာက သာဓကနှင့်တကွရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ “ဟုတ်ကဲ့၊ ဟယ်ရီကိန်းဟာ တစ်နှစ်ကို ဂိုးပေါင်း ၃၀...
တူရင်မြေမှာ နောက်ထပ်တစ်ဂိုးလောက်သွင်းပြီး ကွာတားဖိုင်နယ်ကို တက်ချင်ပါတယ်လို့ ပြောခဲ့သည့် လိုင်ယွန်နည်းပြ ဂါစီယာ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်တွေမှာ အသင်းကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် နဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်တို့ဟာ ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကို မထင်မှတ်ပဲ အရေးနိမ့်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပထမအကျော့မှာ အရေးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် ဒီ ၂သင်းစလုံးဟာ နောက်တဆင့်တက်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက် မဖြစ်အနေ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အီတလီရဲ့ ဆရာတစ်ဆူဖြစ်တဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဟာ လိုင်ယွန်အသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ (၁-ဝ) နဲ့ အရေးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ တပွဲလုံးကို ဂျူဗင်တပ်စ်ဟာ ဖိဖိစီးစီးဖြင့် ကစားနိုင်ခဲ့သော်လည်း လိုင်ယွန်အသင်းရဲ့ ခံစစ် နှင့် တောင်ပံ ကစားသမားများရဲ့ ကစားပုံကြောင့် သွင်းဂိုးမရရှိပဲ ဂိုးဗလာဖြင့် အီတလီကို ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။ လိုင်ယွန်အသင်းဟာ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကို လုံးဝ ဂိုးပေါက်တည်မှုမရှိအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သလို၊ ဒိုင်ဘာလာ သွင်းယူသော ဂိုးသည်လည်း လူကျွံဘောကြောင့် ဂိုးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရခြင်းမရှိပါဘူး။ ပွဲအပြီးမှာတော့ လိုင်ယွန်နည်းပြ ရူဒီဂါစီယာက ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကို ဒုက္ခပေးခဲ့ပုံ နှင့် တူရင်မြေမှာလည်း နောက်ထပ်သွင်းဂိုးတွေရဖို့ မျှော်လင့်ထားကြောင်း ဖွင့်ဟသွားခဲ့ပါတယ်။...
အီတီဟတ်မှာ ပထမရလဒ်ကို ပြောင်းပြန်လှန်ပစ်မည်ဟု ကြုံးဝါးခဲ့သည့် ကတ်စမဲရိုး
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ် (၁၆) သင်းအဆင့် ဘာနေဗျူး၌ ပထမအကျော့ပွဲစဉ်မှာ မမျှော်လင့်ပဲ မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကို (၁-၂) ဂိုးဖြင့် အရေးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ဟာ အစ္စကို၏ မိနစ် ၆၀ မှာ သွင်းဂိုးဖြင့် ဦးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့သော်လည်း ပွဲပြီးခါနီး ၁၅ မိနစ်အလိုလောက်မှာ မန်စီးတီး၏ ချေပဂိုးများကြောင့် ပထမအကျော့ကိုတော့ ရှုံးခဲ့ရပါပြီ။ ရီးရဲလ်ကွင်းလယ်လူ ကတ်စမဲရိုးက ပထမအကျော့ရလဒ်အပေါ်မှာ အားမလိုအားမရဖြစ်နေပြီး ဒုတိယအကျော့ အီတီဟတ်မှာ ကစားမည့်အချိန်မှာ လက်ရှိရလဒ်ကို ပြောင်းပြန်လှန်ပစ်မည်ဟု ကြုံးဝါးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်တော်တို့အလှည့်ပြီးသွားပြီလားဆိုတော့ ? မပြီးသေးပါဘူး။ ဒီအခြေအနေကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းအစရှိတာ တစ်သင်းထဲရှိပါတယ်။ ဒီအသင်းကတော့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ၇၅ မိနစ်လောက်ထိကို ကောင်းကောင်းပေးဆပ်ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျန်တဲ့ ၁၅ မိနစ်လောက်ကို ကျွန်တော်တို့ ထင်သလောက် ကောင်းအောင် မကစားနိုင်ခဲ့ဘူး။ သူတို့တွေက နောက်ကျဂိုးတွေနဲ့အတူ ပြန်လာခဲ့တယ်။...
စပိန်မြေမှဂိုးသမားတစ်ဦးကို ချိန်ရွယ်နေပြန်တဲ့ ချယ်ဆီးအသင်း
လန်ဒန်ကလပ်ချယ်ဆီးအသင်းဟာ အသင်းရဲ့အဓိက ဂိုးသမား ကီပါရဲ့ လက်စွမ်းအပေါ်အလိုမကျမှုတွေရှိနေပြီး ဖော်ပြမှုတွေအရ စပိန်လာလီဂါရဲ့ နာမည်ကြီးဂိုးသမားတစ်ဦးကိုခေါ်ယူဖို့ပစ်မှတ်ထားနေပါတယ်။ချယ်ဆီးအသင်းဟာ ဇန်နဝါရီလ(၂၂)ရက်မှ အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ (၂)ဂိုးစီသရေကျခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ ပုံစံကောင်းပြသနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ ဂိုးသမားကီပါကို နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာ ပွဲထွက်စာရင်းမှချန်လှပ်ခဲ့ပြီး အဆိုပါပွဲစဉ်နောက်ပိုင်း ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲစုံပွဲစဉ်(၅)ပွဲမှာ ဒုတိယဂိုးသမား ကာဘယ်လာရိုကိုသာ အသုံးပြုနေတာပါ။ ကာဘယ်လာရိုပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်(၅)ပွဲမှာလည်း ချယ်ဆီးအသင်းဟာ ပွဲစဉ်တိုင်းလိုလိုပေးဂိုးခွင့်ပြုပေးခဲ့ရပြီး (၂)ပွဲနိုင်၊ (၁)ပွဲသရေ၊ (၂)ပွဲရှုံးရလဒ်နဲ့အတူ ပေးဂိုး(၉)ဂိုးထိခွင့်ပြုပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ချယ်ဆီးရဲ့လက်ရှိဂိုးသမားစာရင်းမှာ ကီပါ၊ ကာလယ်လာရို၊ ကမ်မင်းတို့ရှိနေပေမယ့် အဆိုပါဂိုးသမား(၃)ဦးလုံးဟာ စိတ်ချတဲ့အခြေအနေမှာရှိမနေဘူးလို့ အသင်းဘက်က ယူဆနေပြီး လာမယ့်ရာသီသစ်မှာ လာလီဂါရဲ့ထိပ်တန်း ဂိုးသမားတသစ်ဥိးကိုခေါ်ယူဖို့ပစ်မှတ်ထားနေတာပါ။ ချယ်ဆီးအသင်းခေါ်ယူဖို့ပစ်မှတ်ထားနေတဲ့ ဂိုးသမားဟာ အပြောင်းအရွေ့ကာလ အချို့မှာ ဥရောပအသင်းကြီးအများစုနဲ့ သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်ဂိုးသမား ဂျန်အော့ဘလက်ဖြစ်ပြီး အံ့သြသင့်စေမယ့်ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးနဲ့ ကမ်းလှမ်းသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ ချယ်ဆီးဟာ ဂျန်အော့ဘလက်အတွက် ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွေ့ကြေးပေးကာခေါ်ယူထားတဲ့ ဂိုးသမား ကီပါနဲ့ ပြောင်းရွေ့ကြေးပေါင်(၂၅)သန်းကိုပါ ထည့်သွင်းကမ်းလှမ်းဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ချယ်ဆီးအသင်းရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုဟာ အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်အတွက်...
နာပိုလီဂန္တဝင်ကစားသမားတစ်ဦးရဲ့ သွင်းဂိုးမှတ်တမ်းကိုလိုက်မီသွားတဲ့ ဒရိုင်းမာတန်
နာပိုလီအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ အဓိက ကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ်ရှိနေတဲ့ ဘယ်ဂျီယံတိုက်စစ်မှူး ဒရိုင်းမာတန်ဟာ ဘာစီလိုနာနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားပြီးခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်(၁၆)သင်းအဆင့်ပွဲစဉ်အပြီးမှာ နာပိုလီဂန္တဝင်ကစားသမားတစ်ဦးရရှိထားတဲ့ သွင်းဂိုးမှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့တူညီတဲ့ စံချိန်တစ်ခုကိုရရှိခဲ့တယ် လို့သိရပါတယ်။ နာပိုလီအသင်းနဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းတို့ရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်(၁၆)သင်းရှုံးထွက်အဆင့် ပထမအကျော့ပွဲစဉ်ကို နာပိုလီအသင်းရဲ့ အိမ်ကွင်း ဆမ်ပါအိုလိုကွင်းမှာယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ပြီး (၁)ဂိုးစီသရေရလဒ်နဲ့ ပွဲပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ နာပိုလီအသင်းအတွက်သွင်းဂိုးကို ဒရိုင်းမာတန်က ပွဲချိန်မိနစ်(၃၀)မှာ သွင်းယူပေးခဲ့ပြီး ဘာစီလိုနာအတွက် ချေပဂိုးကိုတော့ ပွဲချိန်(၅၇)မိနစ်မှာ ဂရစ်မန်းကသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲစဉ်မှာ နာပိုလီအသင်းသရေရလဒ်သာရရှိခဲ့ပေမယ့် သွင်းဂိုး(၁)ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ ဘယ်ဂျီယံတိုက်စစ်မှူး ဒရိုင်းမာတန်ကတော့ အသင်းရဲ့ဂန္တဝင်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမားဟောင်း ဟမ်ဆစ်တင်ရှိထားတဲ့သွင်းဂိုးမှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခုကိုလိုက်မီခဲ့တာပါ။ နာပိုလီအသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်လူဟောင်း ဟမ်ဆစ်ဟာ အီတလီစီးရီးအေသွင်းဂိုး (၁၀၀)၊ ပြည်တွင်းဖလားပြိုင်ပွဲတွေမှာ သွင်းဂိုး(၅)ဂိုး၊ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ သွင်းဂိုး(၁၆)ဂိုး စုစုပေါင်းပြိုင်ပွဲစုံသွင်းဂိုး(၁၂၁)ဂိုးနဲ့ နေပယ် ကလပ်အသင်းရဲ့ သွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမားအဖြစ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ဒရိုင်းမာတန်ဟာ ဟမ်ဆစ်ရဲ့ သွင်းဂိုးအရေအတွက် စံချိန်ကိုလိုက်မီခဲ့တာဖြစ်ပြီး စီးရီးအေသွင်းဂိုး(၉၀)၊ ပြည်တွင်းဖလားပြိုင်ပွဲတွေမှ သွင်းဂိုး(၅)ဂိုး၊ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ သွင်းဂိုး...
အီတလီမြေမှာ ရုန်းကန်တတ်ရတဲ့အစဉ်အလာကိုချေဖျက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ ဘာစီလိုနာ
ချန်ပီယံလိဂ်(၁၆)သင်းရှုံးထွက်အဆင့် ပထမအကျော့ပွဲစဉ်တွေမှ နာပိုလီအသင်းနဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းတို့ပွဲစဉ်မှာ ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ သရေရလဒ်သာရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နာပိုလီနဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းတို့ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ နာပိုလီအသင်းက ဦးဆောင်ဂိုး စတင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး မိနစ်(၃၀)မှာ မာတန်က သွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်း သရေရလဒ်ရရှိစေမယ့် ချေပဂိုးကိုတော့ ပွဲချိန် (၅၇)မိနစ်မှာ ဂရစ်မန်းကသွင်းယူပေးခဲ့ပြီး ဘာစီလိုနာအတွက် အဖိုးတန် အဝေးဂိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲစဉ်ကိုအနိုင်မရရှိခဲ့ပဲ သရေရလဒ်နဲ့သာကျေနပ်ခဲ့ရတဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းအနေနဲ့ အီတလီမြေမှာသွားရောက်ကစားတဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်တိုင်းလိုလို ရုန်းကန်တတ်ရတဲ့အစဉ်အလာကိုချိုးဖျက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာဟာ (၂၀၀၉-၁၀)ရာသီမှစတင်ပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ အီတလီရဲ့နာမည်ကြီးအသင်း(၆)သင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရာမှာ နိုင်ပွဲရရှိခဲ့ခြင်းမရှိပဲ သရေရလဒ်သာရယူနိုင်ခဲ့တာပါ။ ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ (၂၀၀၉-၁၀)ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်ပထမအကျော့ ပွဲစဉ်မှာ အင်တာမီလန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ပတ်ဒရိုရဲ့သွင်းဂိုးနဲ့ ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ရှနိုက်ဒါ၊ မိုင်ကွန်၊ မီလီတိုတို့ရဲ့သွင်းဂိုးတွေကြောင့် အင်တာ မီလန်ကို(၃)ဂိုး (၁)ဂိုးနဲ့အရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်း အီတလီမြေမှာရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့နောက်ထပ်ပွဲစဉ်က (၂၀၁၁-၁၂)ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့် ပထမအကျော့ပွဲစဉ်မှာဖြစ်ပြီး ဂိုးမရှိသရေကျခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမအကျော့ဆန်စီရိုမှာ ဂိုးမရှိသရေရလဒ်သာရရှိခဲ့ပေမယ့် ဒုတိယအကျော့ နူးကမ့်ကွင်းမှာတော့ မက်ဆီရဲ့ပင်နယ်တီဂိုး(၂)ဂိုးနဲ့အတူ (၃)ဂိုး...